ငယ်ငယ်ကတည်းက မပြောင်းလဲတဲ့ အကျင့်လေး အလင်းပြလိုက်တဲ့ သရုပ်ဆောင်နိုင်းနိုင်း - Cele GabarCele Gabar
ဆယ်လီကမ္ဘာ ပရိသတ်ကြီးရေ ၊ လူတိုင်းလူတိုင်းမှာ ငယ်စဉ် ကတည်း က အခုအချိန်ထိ ပြောင်းလဲလို့မရနိုင်တဲ့ အကျင့်စရိုက်လေးတွေရှိတတ်ကြပါတယ်။ ကောင်းတဲ့အကျင့်ဖြစ်စေ ၊ ဆိုးတဲ့ အကျင့်ဖြစ်စေ ငယ်စဉ်ကတည်းက ပါလာရင် ကြီးတဲ့ အခါ ပြင်ဖို့ ခက်ခဲတတ်ကြတာပါ။ အခုတစ်ခေါက်မှာတော့ ပြည်သူ့အချစ်တော် ရုပ်ရှင်မင်းသားချော နိုင်းနိုင်းတစ်ယောက် ကတော့ ငယ်ငယ်ကတည်းက ပြင်ဖို့ခက်တဲ့ အကျင့်လေးတစ်ခု ကို လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာကနေ ပရိသတ်သိအောင်ချပြလိုက်ပါတယ်။
နိုင်းနိုင်းက “ငယ်​ငယ်​​လေးကတည်းက ဆိုင်​ကယ်​မြင်​ရင်​ မ​နေနိုင်​တဲ့ အကျင့်​က ခုထိမ​ပြောင်းလဲပဲ ရှိ​နေတုန်းပါ။ က​လေးတုန်းကပုံပြန်​ကြည့်​ပြီး….​ပြောင်းလဲခြင်း​တွေ၊ အိုမင်းခြင်း​တွေ ပါအမြဲကပ်​လျက်​ရှိ​နေတာ ကိုသတိကပ်​မိတယ်​။ ကျွန်​​တော်​ချစ်​​သော ပရိတ်​သတ်​ကြီး​ရေ..အချိန်​​တွေ တစ်​အားမြန်​တယ်​​နော်​…ဒါဆိုဘာလုပ်​မလဲ??? စိတ်​ချမ်းသာ​သော​နေ့တစ်​​နေ့ဖြစ်​ပါ​စေဗျား။
#Actor99” ဆိုပြီးရေးသားထားတာကို တွေ့ရပါတယ်။ ဆယ်လီကမ္ဘာပရိသတ်ကြီးရေ နိုင်းနိုင်း လိုပဲ ငယ်ငယ်ကတည်းက မပြောင်းလဲနိုင်တဲ့ ဘယ်လိုအကျင့်လေးတွေရှိနေခဲ့ကြသလဲ မှတ်ချက်ကနေတစ်ခုခုပြောခဲ့ကြပါဦး ။
ငယျငယျကတညျးက မပွောငျးလဲတဲ့ အကငျြ့လေး အလငျးပွလိုကျတဲ့ သရုပျဆောငျနိုငျးနိုငျး
ဆယျလီကမ်ဘာ ပရိသတျကွီးရေ ၊ လူတိုငျးလူတိုငျးမှာ ငယျစဉျ ကတညျး က အခုအခြိနျထိ ပွောငျးလဲလို့မရနိုငျတဲ့ အကငျြ့စရိုကျလေးတှရှေိတတျကွပါတယျ။ ကောငျးတဲ့အကငျြ့ဖွဈစေ ၊ ဆိုးတဲ့ အကငျြ့ဖွဈစေ ငယျစဉျကတညျးက ပါလာရငျ ကွီးတဲ့ အခါ ပွငျဖို့ ခကျခဲတတျကွတာပါ။ အခုတဈခေါကျမှာတော့ ပွညျသူ့အခဈြတျော ရုပျရှငျမငျးသားခြော နိုငျးနိုငျးတဈယောကျ ကတော့ ငယျငယျကတညျးက ပွငျဖို့ခကျတဲ့ အကငျြ့လေးတဈခု ကို လူမှုကှနျရကျစာမကျြနှာကနေ ပရိသတျသိအောငျခပြွလိုကျပါတယျ။
နိုငျးနိုငျးက “ငယျငယျလေးကတညျးက ဆိုငျကယျမွငျရငျ မနနေိုငျတဲ့ အကငျြ့က ခုထိမပွောငျးလဲပဲ ရှိနတေုနျးပါ။ ကလေးတုနျးကပုံပွနျကွညျ့ပွီး….ပွောငျးလဲခွငျးတှေ၊ အိုမငျးခွငျးတှေ ပါအမွဲကပျလကျြရှိနတော ကိုသတိကပျမိတယျ။ ကြှနျတျောခဈြသော ပရိတျသတျကွီးရေ..အခြိနျတှေ တဈအားမွနျတယျနျော…ဒါဆိုဘာလုပျမလဲ??? စိတျခမျြးသာသောနတေ့ဈနဖွေ့ဈပါစဗြေား။
#Actor99” ဆိုပွီးရေးသားထားတာကို တှရေ့ပါတယျ။ ဆယျလီကမ်ဘာပရိသတျကွီးရေ နိုငျးနိုငျး လိုပဲ ငယျငယျကတညျးက မပွောငျးလဲနိုငျတဲ့ ဘယျလိုအကငျြ့လေးတှရှေိနခေဲ့ကွသလဲ မှတျခကျြကနတေဈခုခုပွောခဲ့ကွပါဦး ။
Previous Previous post: ယုံကြည်ရာ သီချင်း ကာဗာဆိုရင်းနဲ့ လူမှုကွန်ရက်ပေါ်မှာ လူသိများလာတဲ့ ကိုရီးယားက မာသထူးဝါးဆိုတဲ့ ဆယ်ကျော်သက် ကောင်မလေး
Next Next post: မြန်မာငွေ သိန်း(၄၀၀၀) ကျော်တန် ကမ္ဘာ့အမြန်ဆုံး Ferrariကားကြီးကို ၀ယ်ယူလိုက်တဲ့ နုတ်ခမ်းနီမလေးတွေရဲ့ အချစ်တော် ဦးစိုင်း
ရွှေတောင်ကြီးပြိုခဲ့တဲ့ မင်းစိန်ရဲ့မိသားစုဝင်တွေကို ကူညီဖေးမခဲ့ကြတဲ့ သူများ
Published: January 7, 201912:02 pm
အန်ပေါင်း နဲ့ လက်ဆောင်ပုံတူရုပ်ထုတစ်ခုကြောင့် ပရိသတ် ပွဲဆူတာခံနေရတဲ့ ဂျီဖတ်
Published: February 6, 20194:42 pm
စိုးမြတ်နန္ဒာရဲ့ အကြောင်းတွေကို ရင်ဖွင့်လာတဲ့ စိုးသူ
Published: January 29, 20196:11 pm
တပ်မတော်ရေရဲ့အပြင်းထန်ဆုံးသော သင်တန်းတစ်ခု အမှန်တကယ်လေ့ကျင့်ခဲ့ကြတဲ့ သရုပ်ဆောင်များ
Published: December 10, 201811:39 am Updated: 1:07 pm